फिर्ता र फिर्ता को सही - THE INDIAN FACE
प्रयोगकर्ता फर्कन सक्छ THE INDIAN FACE, कुनै उत्पादन जुन उत्पादन दोष प्रस्तुत गर्दछ। सम्झौताका उत्पादनहरूको प्रकृतिलाई ध्यानमा राख्दै, प्रयोगकर्तासँग कुराकानी गर्न एक महिनाको अवधि हुन्छ THE INDIAN FACE यो उनीहरूसँग अनुरूप छ। यदि यो अवधि नाघ्यो भने, कुनै पनि क्षतिहरू प्रयोगकर्ता द्वारा ग्रहण गरिनेछ।
फिर्ताको औपचारिक बनाउन, प्रयोगकर्ताले सम्पर्क गर्नै पर्दछ THE INDIAN FACE एक महिना अवधिको बीचमा, ठेगानामा सम्पर्क @ theindianface .com, उत्पादन वा उत्पादनहरू फिर्ता हुने स indic्केत गर्दै, एक फोटोग्राफर र त्यसमा भेटिएका त्रुटिहरूको विस्तृत सूची संलग्न गर्दै
एक पटक THE INDIAN FACE प्रयोगकर्ताबाट सञ्चार प्राप्त भएको छ, यसले तपाईंलाई return- business व्यापार दिन भित्र सूचित गर्दछ कि उत्पादन फिर्ता गर्ने कि नगर्ने। यदि फिर्ता रकम बढ्छ भने, THE INDIAN FACE यसले प्रयोगकर्तालाई तिनीहरूका कार्यालयहरू / गोदामहरूमा दोषपूर्ण उत्पादन स collect्कलन वा पठाउनको लागि संकेत गर्दछ।
फर्काउनको लागि प्रत्येक उत्पादन अप्रयुक्त हुनुपर्दछ र यसको सबै लेबलहरू, प्याकेजि and र जहाँ उपयुक्त हुन्छ, कागजातहरू र मौलिक सहायक तत्वहरू यससँग आएका हुन्। यदि प्रयोगकर्ता यस तरिकाले अगाडि बढ्दैन भने, THE INDIAN FACE फिर्ती अस्वीकार गर्न को लागी अधिकार राख्छ।
एकचोटि उत्पादन प्राप्त भयो र दोषहरू प्रमाणित भए, THE INDIAN FACE प्रयोगकर्तालाई उत्पादलाई समान विशेषताहरूको अर्को प्रतिस्थापन गर्न संभावना दिनेछ, जबसम्म यो विकल्प उद्देश्यपूर्ण रूपमा असम्भव वा असंगत THE INDIAN FACE.
उस्तै सुविधाहरू वा नयाँ मोडेलको साथ उत्पादको डेलिभरी जुन प्रयोगकर्ताले छनौट गरे, उपयुक्तको रूपमा, आगामी -3--5 व्यावसायिक दिनमा मिति देखि बनाइनेछ। THE INDIAN FACE प्रयोगकर्ताले दोषपूर्ण उत्पादको प्रतिस्थापन वा नयाँ मोडेलको ढुवानीलाई पुष्टि गर्नेछ।
यदि प्रयोगकर्ताले सम्झौता समाप्त गर्दछ भने, THE INDIAN FACE दोषपूर्ण उत्पादको खरीदको लागि प्रयोगकर्तालाई भुक्तान गरिएको सम्पूर्ण रकमको फिर्ती पूरा गर्नेछ।
THE INDIAN FACE प्रयोगकर्ताहरूलाई सूचित गर्दछ कि भुक्तानी गरिएको रकमको फिर्ताको लागि शब्द भुक्तान विधिमा निर्भर गर्दछ जुन प्रयोगकर्ताले उत्पादन खरीद गर्दा प्रयोग गरेको थियो।
यद्यपि, प्रयोगकर्ताले फिर्ताको प्रत्यक्ष लागत उठाउनु पर्छ THE INDIAN FACE, चाहे तपाईं पूर्ण रूपमा अर्डर फिर्ता वा आदेश मा केहि उत्पादनहरू मात्र फिर्ता गर्ने निर्णय।
फिर्ताको औपचारिक बनाउन, तपाईले सम्पर्क गर्नुपर्नेछ THE INDIAN FACE ठेगानामा सम्पर्क @ theindianface .com, एक पूर्ण फिर्ताको फारम पठाउँदै जुन यी नियम र सर्तहरू को साथ ANNEX १ को साथ पठाउँदै। १ भनिएको संचारको प्राप्तिमा, THE INDIAN FACE यसले यसको कार्यालय वा गोदामहरूमा अर्डर पठाउँदाको स indicate्केत गर्दछ।
THE INDIAN FACE अर्डर फिर्ता गर्न प्रयोगकर्ताले भाडामा लिने कुरियर कम्पनीको लागि जिम्मेवार छैन। यस अर्थमा, THE INDIAN FACE प्रयोगकर्तालाई सिफारिश गर्दछ कि कुरियर कम्पनीले तपाईंलाई डेलिभरीको प्रमाण प्रदान गर्न आवश्यक गर्दछ एक पटक कुरियरले उत्पादनलाई अफिसमा जम्मा गरे THE INDIAN FACE, ताकि प्रयोगकर्ता सजग हो कि उत्पाद सही डेलिभर गरिएको छ THE INDIAN FACE. THE INDIAN FACE ठेगानाका लागि जिम्मेवार छैन जहाँ प्रयोगकर्ताले फिर्ताको लागि अर्डर पठाउँदछ। यो युरोपको सन्दर्भमा सधैं हाम्रो कार्यालय हुनुपर्दछ। यदि हामीसँग डेलिभरी कन्फर्मेसन छैन र प्रयोगकर्ताले डेलिभरी रसिद पेश गरेन भने, THE INDIAN FACE घाटाका लागि जिम्मेवार हुने छैन र यो प्रयोगकर्ता हुने छ कि ठेक्का थियो कि यातायात कम्पनी दाबी गर्नु पर्छ।
उत्पाद अप्रयुक्त हुनुपर्दछ र यसको सबै लेबलहरू, प्याकेजि and र जहाँ उपयुक्त छ, कागजातहरू र यसका साथ आएका मौलिक गौण तत्वहरू। यदि प्रयोगकर्ता यस तरिकाले अगाडि बढ्दैन वा उत्पादले कुनै नोक्सान भोगेको छ भने, प्रयोगकर्ताले स्वीकार गर्दछ कि उत्पादनले मूल्यह्रास भोग्न सक्छ वा त्यो THE INDIAN FACE फिर्ती अस्वीकृत हुन सक्छ।
एक पटक THE INDIAN FACE आदेश राम्रो अवस्थामा छ कि जाँच गर्नुहोस्, THE INDIAN FACE प्रयोगकर्ता द्वारा भुक्तान गरीएको कुल रकम फिर्ता गर्न अगाडि बढ्नेछ।
यदि प्रयोगकर्ताले पूर्ण रूपमा अर्डर फिर्ता गर्ने निर्णय गरे, THE INDIAN FACE प्रयोगकर्तालाई उसले भुक्तान गरेको सबै रकम फिर्ता हुनेछ र यदि उसले केवल कुनै पनि उत्पादनहरू फिर्ता गर्‍यो, केवल ती उत्पादनहरूसँग सम्बन्धित अंश फिर्ता हुनेछ।
THE INDIAN FACE प्रयोगकर्ताहरूलाई सूचित गर्दछ कि भुक्तानी गरिएको रकमको फिर्ताको लागि शब्द भुक्तान विधिमा निर्भर गर्दछ जुन प्रयोगकर्ताले उत्पादन खरीद गर्दा प्रयोग गरेको थियो। जे भए पनि, THE INDIAN FACE सकेसम्म चाँडो भुक्तानी गरिएको रकम फिर्ता गर्नेछ, कुनै पनि केसमा, फिर्ता गरिएको उत्पादन प्राप्त भएको मिति पछिको १ calendar क्यालेन्डर दिन भित्र।
THE INDIAN FACE वेबसाईटमा प्रस्ताव गरिएको अर्को उत्पादको लागि प्रयोगकर्ताले खरीद गरेको उत्पाद बीचको परिवर्तन स्वीकार गर्दैन।